नागरिक समाज - मान्छे को एक ठूलो समूह एक संस्कृति, भन्सार र राज्य सीमाना द्वारा एकताबद्ध छन् जो। सबै समय यो समाज मा राज्य प्रणाली को आधार थियो। जग सीधा मानिसहरूले प्रत्येक देशमा राखे पछि। यसलाई समायोजित गर्न आवश्यक विशिष्ट स्थिति समाज भित्र कि उल्लेख गर्नुपर्छ। यो सिद्धान्त एक लामो समय को लागि शुरू गरिएको छ। यस मामला मा मुख्य मुद्दाहरू, समाज को awkwardness छ। यसको संरचना - एक जटिल संयन्त्र। लगातार अनुगमन उपस्थिति बिना उहाँले बस असफल हुन सक्छ। भर इतिहास, मान्छे सामाजिक सम्बन्ध सबैभन्दा शक्तिशाली र प्रभावकारी नियामक फेला पार्न प्रयास गरेका छन्। खोजको मार्गमा धर्म र हिंसा प्रयास गरिएको छ, तर यी विभाग अप्रभावी हुन देखाइएको छ। कि सही को आगमन संग परिवर्तन सबै। मान्छे त्यहाँ वैध कानूनी मान्यता योगफल भन्दा राम्रो केही छ भनेर बुझे छन्। यस मामला मा, सामाजिक सम्बन्ध को मुख्य नियामक - व्यवस्था - एकदम बहुमुखी वर्गमा छ। तसर्थ, यसको प्रत्यक्ष applicability सुविधा गर्न अनुमान केही प्रकारको गठन गरिएको छ। यी मध्ये एक व्यापक घरेलू व्यवस्थामा प्रयोग गरिन्छ जो निर्दोष को अनुमान छ।
अनुमान - मूल बरु कानुनी क्षेत्र भन्दा दार्शनिक मा देखा जो एक श्रेणी। त्यो छ, यसको सुविधाहरू बुझ्न क्रममा, यो आवश्यक पनि घटना प्रतिनिधित्व सुरु स्थितिहरू बुझ्न छ। तसर्थ, अनुमान - विपरीत साबित सम्म सबै अवस्थामा साँचो छलफल गर्ने धारणा एक प्रकारको। अर्को शब्दमा, तथ्यलाई कडा तथ्य आधारित यसको आधिकारिक परिवर्तन नभएसम्म अपरिवर्तनीय सामग्री छ।
निर्दोष को अनुमान
उल्लेख श्रेणी घरेलू व्यवस्था र रूसी कानून यसको आवेदन फेला छ। तर हामीलाई क्रममा सबै विश्लेषण गरौं। निर्दोष को अनुमान दोष विशिष्ट व्यक्ति को अभाव को एक अकाट्य तथ्य हुन मानिन्छ। यस मामला मा व्यक्ति, एक अपराध Committing आफ्नो दोष प्रमाण सम्म कुनै पनि प्रतिबन्धको विषय हुँदैन। यो अनुमान आधारभूत छ अपराधी कार्यवाही को सिद्धान्त। यस मामला मा, यस सिद्धान्त मा आधारित छ जो एक वैधानिक आधार छ।
एक निश्चित कानुनी स्थिति कुनै पनि कानुनी अनुमान। त्यो छ, यी विभाग विभिन्न नियमहरु मा निश्चित छन्। यस मामला मा, निर्दोष को अनुमान यसलाई सुरक्षित कि प्रमुख कागजातहरू दिइएको, विनियम को धेरै दुई रूपमा स्तर छ।
माथि उल्लेख रूपमा, निर्दोष को अनुमान सबैभन्दा आपराधिक व्यवस्थामा उच्चारण गरिएको छ। यो मा enshrined छ आपराधिक प्रक्रिया कोड रूसी संघ, अर्थात् लेख 14 को मान्यता द्वारा प्रदान प्रावधान आधारित को, को अनुमान सबै कानून प्रवर्तन र न्यायिक अधिकार को लागि अनिवार्य छ।
संविधान को धारा 49 पनि पहिले उल्लेख सिद्धान्त समावेश छन्। आधारभूत व्यवस्था यस प्रावधान, वास्तवमा, आपराधिक व्यवस्थामा समान कानुनी निर्माण को आवेदन को लागि आधार छ।
यो व्यापक छ रूपमा यस लेखमा हामी निर्दोष को अनुमान मा आधारभूत व्यवस्था को स्थिति छ मा, हेर्न भनेर टिप्पण लायक छ।
संविधान को धारा 49
यसरी, रूसी संघ को मौलिक व्यवस्था को दर र निर्दोष को अनुमान रूपमा कानुनी संरचना को कथा बताउँछ। एकै समयमा कला मा। रूसी संघ को संविधान को 49 मात्र होइन अवधारणा, तर पनि भने कानुनी घटना अन्य पक्षहरू एक नम्बर प्रकट गर्छ। लेख तीन भागहरु हुन्छन्। तिनीहरूलाई प्रत्येक उदाहरण को लागि अनुमान को एकदम रोचक पक्ष छन्:
कला को भाग 1। रूसी संविधान को 49 लामो आफ्नो दोष अनुसार रूसी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया संग साबित छ कुनै पनि व्यक्ति को निर्दोष बारेमा भन्छन्।
को घन्टा।2आफ्नो निर्दोष साबित गर्न प्रतिवादी मा एक कर्तव्य आयातित गर्न नसक्नुको बुझाउँछ।
घंटा मा।3Tbsp। रूसी संघ को संविधान को 49 fatally, को प्रतिवादी गरेको दोष रूपमा एक्सप्रेस शङ्का आफ्नो पक्षमा व्याख्या गर्न भनेर संकेत गर्नुभयो।
हामीले देख्यौं, संवैधानिक आदर्श को स्थिति को वर्तमान व्यवस्थामा निर्दोष को अनुमान को असाधारण एक सम्पूर्ण रूपमा भूमिका र कानुनी क्षेत्रमा बारेमा बोल्न प्रतिनिधित्व। श्रेणी यो हाम्रो देश को सम्पूर्ण कानुनी प्रणाली मौलिक बनाउने, आधारभूत व्यवस्थामा enshrined छ भन्ने तथ्यलाई। थप राम्ररी श्रेणी को सबै पक्षहरू अनुसन्धान गर्न, यो कानुनी मान्यता पनि प्रत्येक भाग विश्लेषण गर्न आवश्यक छ।
व्यक्ति को निर्दोष र आफ्नो स्थापना को प्रक्रिया
हामी वस्तु विश्लेषण भने। टिप्पणी संग रूसी संघ को संविधान को 49, यसको पक्षमा धेरै स्पष्ट छन्। उदाहरणका लागि, पहिलो भाग एक व्यक्ति को दोषी अनुसार व्यवस्था संग साबित गरिनेछ भनेर भन्छन्। यो कथन देखि दुई महत्त्वपूर्ण पक्षलाई बाहिर पौडी खेल्न।
पहिले, पहिचान एक व्यक्ति केहि दोषी objectively गर्नुपर्छ।
दोस्रो, दोषी को भेला प्रमाण पनि स्थापित कानुनी प्रक्रिया भित्र भइरहेको छ।
पहिलो मामला मा हामी पाठ्यक्रम को अनुसन्धान अधिकारी, छानबिन, अभियोजन को गतिविधिहरु र, अदालत बारेमा कुरा गर्दै छन्। आखिर, यी एजेन्सीहरूले संगठित र मानिसको दोषी साबित को एक उद्देश्य प्रक्रिया लागू गर्न सक्षम छन्। दोस्रो पक्ष सन्दर्भमा, यो अत्यंत महत्व, फेरि, कानुन प्रवर्तन निकायहरूबाट को प्रतिनिधिको लागि हो। यसलाई उल्लेख गर्नुपर्छ, एक निश्चित प्रक्रिया भित्र दोषी प्रमाण त्यहाँ छ, उल्लंघन जो सबै संकलित प्रमाण को हानि entails। यस मामला मा, त्यहाँ एक बरु महत्वपूर्ण कुरा हो। यो एक अदालतले विश्वस्तता नै प्रमाण प्रक्रिया बिना कुनै अर्थ छैन।
कर्तव्य आयातित गर्न नसक्नुको
भाग2Tbsp। रूसी संघ, टिप्पणी लेख मा प्रस्तुत छ जो, को संविधान को 49 को निर्दोष साबित गर्न आफ्नै मा एक व्यक्ति जबरजस्ती निषेधित। अर्को शब्दमा, एक व्यक्ति कुनै पनि साक्षी राख्छ भने, पूर्व-परीक्षण छानबिन प्रासंगिक शरीर स्वतन्त्र प्रमाणित गर्न बाध्य छन्। यस मामला मा व्यक्ति एक विवरण, कागजात र आफूलाई शङ्काको को राहत अन्य प्रमाण प्रदान गर्न आवश्यक छैन।
यो प्रावधान धेरै प्रक्रियागत सम्बन्ध असर गर्छ। उदाहरणका लागि, संदिग्ध वा आरोप पुष्टि गर्न, प्रश्नहरूको जवाफ, त्यसको विपरीत, यो अवस्थामा आवश्यक समझे प्रमाण दिन इन्कार गर्न सक्छ, वा। अर्को शब्दमा, व्यक्ति उसलाई केहि कसैले गर्न सक्छन् स्वीकार गर्न रूपमा आफ्नो कार्यहरू चयन गर्न स्वतन्त्र छ। तसर्थ, प्रमाण एक कार्य को आयोग एक विशिष्ट व्यक्ति fullest दोष देखाउन पर्छ। अन्यथा, मान्छे निर्दोष presumed गरिने।
कला को प्रावधान। रूसी संघ को संविधान को 49 पनि एक व्यक्तिको दोष शङ्का को व्याख्या को नियम बारेमा बताउनुहोस्। भाग3मा, ठेस मानव संलग्नता बारे शङ्का आफ्नो निर्दोष पक्षमा व्याख्या गर्नुपर्छ भन्नुभयो। तर यहाँ एक निश्चित विशिष्टता छ। तल लाइन यी शङ्का सबै तथ्य छैनन् भन्ने छ। एक व्यक्तिको दोषी व्यक्तिगत तत्व objectively र राम्ररी जाँच गर्न सम्भव हुनुपर्छ। पक्कै तिनीहरूले अस्वीकार कि सक्दैन वा अन्य तथ्यहरू ब्लक तथ्यलाई प्रस्ट को यस मामला मा। अर्को शब्दमा, यी परिस्थितिमा सही र irrefutable छन्।
घरेलू कानून लागि मान श्रेणी
राष्ट्रिय कानुनी सिस्टम मा, त्यहाँ एक जो निर्दोष को अनुमान छ धेरै रोचक विभाग, छन्। आरएफ संविधान (कला। 49) यो घटना एक व्यापक विवरण प्रदान गर्दछ। तर यस मामला मा, एक तार्किक प्रश्न खडा: राष्ट्रिय कानून मा निर्दोष को अनुमान द्वारा प्ले भूमिका कस्तो छ? याद गर्नुहोस् पहिलो कुरा यो संस्थाले सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक छ भन्ने तथ्यलाई छ।
कि यसको अस्तित्व राज्य नै को सार अन्डरस्कोरहरू छ। अर्कोतर्फ, निर्दोष को अनुमान केही अङ्गहरूको गतिविधि केही वास्तविक सुविधाहरू गराउँछ। यो सिधै अपराध अनुसन्धान प्रक्रिया कारक असर गर्छ। साथै, अनुमान अस्तित्व रूस देश मा एक totalitarian राजनीतिक शासन निर्माणको सिद्धान्त टाढा सारिएको छ भनेर भन्छन्।
अन्य उद्योगहरूमा निर्दोष को अनुमान
हामी यो बुझ्न रूपमा, कला। रूसी संघ को संविधान को 49 छैन लेख डिजाइन मा उल्लेख व्यवस्था मात्र स्रोत हो। यो कानुनी घटना समकालीन व्यवस्था, अर्थात् धेरै शाखा मा हुन्छ:
संविधान मा निर्दोष को अनुमान उपस्थिति धेरै कानुनी सम्बन्ध निर्माण गर्न अनुमति दिन्छ। आखिर, आधारभूत व्यवस्था प्रणालीको कानुनी शक्ति को आधार छ।
हामी पत्ता लगाउन र निर्दोष को अनुमान के गठन खोजे। आरएफ संविधान (कला। 49) यस विशेष कानुनी बिन्दु वर्णन गर्दछ। निष्कर्षमा, यो यसको अस्तित्व राम्रो हाम्रो देश को लगभग सम्पूर्ण कानुनी प्रणाली परिवर्तन भएको छ भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ।
"गैर व्यावसायिक संगठन मा" संघीय व्यवस्था (संशोधित)
को GRU (विशेष सेना) प्राप्त कसरी? रूसी Spetsnaz GRU। मुख्य समाचार निर्देशनालय
अर्नस्ट Theodor Amadey Gofman: जीवनी र फोटो
तपाईं अपग्रेड पछि विन्डोज 10 अनलाइन काम गर्दैन। इन्टरनेट विन्डोज अपडेट 10 पछि काम गर्न छोड्यो
"Toledo को दृश्य" एल ग्रिको द्वारा - पहिलो युरोपेली परिदृश्य को एक
ओम्स्क क्षेत्र को ताल: पानी को सबै भन्दा लोकप्रिय शरीर
यो दबाइ संग उपचार को समीक्षा 'Clotrimazole' बताउन
BelAZ-75710 - संसारमा सबै भन्दा ठूलो कार
तपाईं अंगूरबाट के गर्न सक्नुहुन्छ? गृह व्यंजनहरू
आजको आर्थिक बजार मा उद्यम व्यवस्थापन को उद्देश्य